Voina goavana AMBANIN’AMPAMARINANA :: Mitantara ny fitrangan’ny fianjeran’ilay vatobe ireo lasibatra • AoRaha
Voina goavana AMBANIN’AMPAMARINANA Mitantara ny fitrangan’ny fianjeran’ilay vatobe ireo lasibatra
Mbola nampisahotaka ny mponina teny Ambanin’Ampamarinana, afak’omaly maraina, ny momba ny fikarohana ny lohan’ny vehivavy iray, izay tsy hita popoka. Niresaka momba ny fiainan’izy ireo teny amin’ity toerana ity nandritra ny 54 taona ihany koa ny lehilahy iray, isan’ireo nianjeran’ny iray tamin’ireo vatobe manodidina ny 30 taonina. Tokantrano roanjato sy telo arivo no tsy maintsy esorina eny ambanin’ireo vato be manodidina ity tehezan-tendrombohitra ity. Betsaka ireo tapa-kevitra ny hifindra monina saingy…
Tato anatin’ny taona vitsy izao no efa nisy filazana nataon’ireo manam-pahaizana momba ny fihetsehan’ny tany fa tandindonin-doza ireo olona monina eny amin’ny manodidina an’Ampamarinana, vokatry ny fisian’ireo vatobe sy ny toetany izay ahiana hianjera na hihotsaka amin’ny fotoana tsy voafetra. Nitranga tokoa izany, taona vitsy taty aoriana, ka namoizana ain’olona maherin’ny roapolo. Vao tapa-bolana izay no namoizana ain’olona fito, taorian’ny fihotsahan’ny tany eo amin’ity tehezan-tendrombohitra eny Manjakamiadana ity. Nitohy, afak’omaly, izany ka olona efatra indray no nindaosin’ny fahafatesana. Mizarazara ny hevitr’ireo mponina sasany eny an-toerana mikasika ny antony mety mahatonga izao zava-misy izao. Ankoatra ny lafiny siansa, izay efa navoitran’ireo manam-pahaizana eny amin’ny Yoga na ny Fizika ampiharina amin’ny tany, dia misy ireo manahy amin’ny fanotana fady vokatr’ireo olona sasany voalaza fa miompy kisoa sy mamboly tongolo monina eny an-toerana.
Tsy tao an’eritreritra
Araka ny tarehimarika avy amin’ny fanadihadiana avy amin’ny siansa dia tandindonin-doza avokoa ireo tokantrano miisa roanjato sy telo arivo mana-morona io tehezan-tendrombohitra io. “Raha tsorina dia izay trano tafiditra ao anatin’ny zato metatra ambanin’Ampamarinana dia misy vato be eo amboniny mety hianjera tampoka, rahampitso”, hoy ireo manam-pahaizana momba ny toetany.
Farahafakeliny, fokontany efatra no voakasika amin’izany dia : i Tsimialonjafy, Ambanin’Ampamarinana, Ambohipotsy ary Ankadilalana.
Manoloana izao loza mitatao izao dia misy ireo fepetra raisin’ny fanjakana mba hisorohana ny famoizana ain’olona toy iny afak’omaly iny. Ny harivan’ny zava-nitranga ihany, tamin’ny alahady lasa teo, dia nampivory ireo minisitra voakasika tamin’ny loza ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry. Tapaka tamin’izany fa: “tsy maintsy hafindra ireo olona tra-boina sy manana trano eny an-toerana mba hisorohana ny loza”. Any amin’ny tanàna Voara, eny Andohantapenaka sy any amin’ny trano mora eny Alakamisy Ambohidratrimo aloha no hasiana ireo miala ny tranony sy ireo tra-boina.
Nisy tamin’ireo mponina no nisafidy avy hatrany ny hiala teny amin’ny toeram-ponenany, taorian’ny loza. Mitantara Rakotomalala Jean Maurice, isan’ireo rava trano tanteraka, nianjeran’ny vatobe. “Mafy ny miala amin’ny trano noharian’izy ireo am-polony taona maro saingy tsy maintsy mitsinjo ny aina. Atao ahoana moa no tsy hiala kanefa vato efa hoe roapolo ka hatramin’ ny telopolo taonina no mianjera eo ambonin’ny tranonao?”, hoy izy.
“Teto aho no teraka dia mbola eto hatramin’izao. Tsy nampoizina sady tsy tao an-tsaina mihitsy ny zava-nisy, omaly (Ndlr: afak’omaly). Soa aloha fa tsy nisy ny aina nafoy taminay efa-mianaka na dia samy tato an-trano avokoa aza, tamin’io fotoana nitrangan’ny loza io”, hoy ity raim-pianakaviana ity.
47 taona, Rakotomalala Jean Maurice, amin’izao fotoana izao. Isan’ireo tsy mandà ny hiala amin’ny tranony izy. “Vita “titre” sy baorina ity taninay ity. Raha toa ka hitan’ireo tompon’andraikitra fa tsy misy vahaolana afa-tsy ny fialanay dia tsy manohitra izahay. Na izany aza anefa, tokony hatao mazava tsara ny fepetra any amin’ireo toerana izay hametrahana anay. Divi-janahary ny tsy nisian’ny fahavoazana lehibe teo amin’ny fianakaviako satria ny ilan’ny tranonay ihany no nianjeran’ilay vatobe”, hoy izy.
Etsy an-kilan’izay anefa, misy ireo tokantrano manodidina ny dimampolo, izay nanao fanambaràna niraisana tamin’ny tsy fanekena ny fialan’izy ireo eny amin’ity toerana ity, omaly. “Ny zavatra tapakay, taorian’ny fivorianay, eto amin’ny fokontany Ambanin’Ampamarinana dia hoe: tokony hodioviana ireo toerana misy lobolobo misy ireo vato ireo dia ho hita ireo izay tokony hazera dia hazera. Izany no natao teto hatramin’izay ary nahitam-bokany, fa nanomboka ny taona 2009 no tsy nisy intsony io fanadiovana io. Manaiky miala izahay mandritra ny fotoana hanadiovana fa tsy hoe mandrakizay akory. Ny herim-ponay sy ny fanananay efa eto daholo ka izay no antony tsy anekenay”, hoy Randrianarisoa Anny, isan’ireo manana trano eny amin’ity toerana ity.
Araka ny tatitra ny Filankevitry ny minisitra, afak’omaly, taorian’ity loza ity, anefa dia: “efa nisy ny baiko hentitra avy amin’ny Prefektioran’Antananarivo renivohitra tamin’ny alalan’ny didim-pitondrana ny amin’ny tsy maintsy hialan’ireo mponina eny amin’iny toerana iny maika eny amin’ny toeram-ponenany”.
Tsy maintsy miala
Nilaza ny filoha lefitry ny fokontany Ambanin’Ampamarinana, Ranaivojaona Jeannot, omaly, fa: “tsy mbola nisy aloha ireo rava trano tao anatin’ity fokontany ity no nafindra monina any Andohantapenaka. Hatreto dia tokantrano folo no nafindra eny amin’ny “village Voara”. Raha ny isan’ny tra-boina fotsiny anefa dia mahatratra roapolo sy roanjato”, hoy io filoha lefitry ny fokontany Ambanin’Ampamarinana io.
Hatramin’ny omaly hariva, mbola nifamory maika ireo manampahefana eo anivon’ny Faritra Analamanga, notarihin’ny Préfetn’ny pôlisy, nandinihana izao zava-nitranga izao. Nambaran’ny jeneraly Ravelonarivo Angelot fa: “tsy ireo trano rehetra aloha no ho voakasiky ny fanesorana an’ireo mponina ao aminy fa ireo trano eo ambanin’ireo vatobe nianjera”. “Izany hoe izay trano tafiditra manodidina ny dimampolo ka hatramin’ny fitopolo metatra dia tsy maintsy miala avokoa ny mponina ao aminy ary hafindra toerana. Raha toa ka misy ny tsy manaiky dia voatery hitady fomba hafa hanerena azy ireo izahay satria aina no laharam-pamehana”, hoy izy nanamafy.
Tokony ho tamin’ny 10 ora maraina latsaka teo no nitrangan’ny loza teny Ambanin’Ampamarinana, afak’omaly. “Naheno zavatra nipoaka kely izahay dia ireo vato avy any ambony any avy hatrany no nihatra. Minitra vitsy monja dia tonga nianjera tao ambonin’ny tranonay ny iray tamin’ireo vato”, hoy hatrany ny fitantaran-dRanaivojaona Jeannot.
Trano enina no potika nianjeran’ireo vato ireo. “Vao nitranga ny loza dia izahay samy fokonolona no nifamonjy nisava haingana ireo trano nisy ireo vato nianjera teo amboniny. Vetivety taorian’izay no tonga ihany koa ireo zandary am-polony maro nanao rodobe nanampy. Nisy ny razana iray izay tsy nisy lohany. Noho ny firaisan-kinan’ny fokonolona dia hita ihany ny lohan’ilay vehivavy, ora vitsy taty aoriana. Tombony lehibe ho anay ny fisian’ny tobin’ny Zandarimaria eto Ankadilalana satria na inona mitranga eto aminay dia izy ireo hatrany no mamonjy andro sy alina. Tonga ihany koa ireo mpamonjy voina avy eny Tsaralalàna taorian’izay”, hoy ny lefitry ny lehiben’ny fokontany.
“Tany an-tsena aho no nisy nampandre ny amin’ny fitrangan’ny loza. Avy hatrany dia nanome baiko ireo zandary rehetra miantoka ny fiambenana ny renivohitra sy ireo mihodinkondina amin’ny fiarakodia mba ho eny an-toerana hanampy amin’ny famonjena. Tsy nionona tamin’izay ny tenako fa tonga dia nody teto Ankadilalana ka nandeha nijery ifotony ny zava-nisy. Nifanampy tamin’ny fikarohana ireo niharam-boina sy fandefasana azy ireo tany amin’ny hôpitaly ireo zandary tonga teny an-toerana”, hoy ny lietna-kolonely Randrianarivelo Jean Elysé Annissé, Kaomandin’ny vondron-tobim-paritry ny Zandarimaria Analamanga.
Ora vitsy taorian’izay dia tsy namela ireo mponina teny an-toerana ho irery ireo tompon’andraiki-panjakana fa nandeha nidina ifotony. Minisitra maromaro no nifampiresaka tamin’ireo mponina ka isan’ireny ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny jeneraly Rakotonirina Léon Richard, ny minisitry ny Filaminam-bahoaka, ny Contrôleur général Rafanomezantsoa Roger ary ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, ny jeneraly Ravalomanana Richard.
Nanome baiko ny tsy maintsy hiambenana ny fananan’ireo mponina eny an-toerana andro sy alina ary hanampiana ireo mponina izay miala ny trano fonenany ny jeneraly Ravalomanana Richard. “Tafiditra ao anatin’ny asanay ny fiambenana ny olona sy ny fananany ka manome toky ny Zandarimaria fa hanatanteraka izany. Tsy eny Ambanin’Ampamarinana ihany fa hatrany Ambohidratrimo izay hamindrana ireo mponina miala amin’ny tranony dia hisy paositry ny Zandarimaria vaovao”, hoy ity tompon’andraikitra voalohan’ny Zandarimaria ity.
Mbola vatobe maro no mandondona ity toerana ity ary ahiana hianjera tampoka, araka ny fanamarihan’ireo manam-pahaizana. Ilaina ny fiaraha-mientan’ny rehetra sy ny firaisankina mba hisorohana ny loza toy izao.
Fahitana razana :: Vehivavy iray hita faty tao amin’ ny farihin’i Masay
Poa-basy tany Mahitsy :: Vehivavy lehibe ahiana ho matin’ ny fahatairana